पर्दा पछाडि र अगाडि
'दलन' टेलिश्रृंखलाको 'धम्मरे परियार' देखि चलचित्र 'पशुपतिप्रसाद' को 'मित बा' सम्म प्रकाश घिमिरे प्रभावशाली चरित्र अभिनेताका रूपमा उभिँदै आएका छन् । घरपरिवार र कामगरि खाने पेशाको दैनिकीबाट समय मिलाएर 'अभिनयकर्म' प्रतिको उनको समर्पण अरू कलाकर्मीभन्दा भिन्न छन् ।
रुचि, पेशा र परिवार । तीनथोककै लागि दैनिकीमा समयको सन्तुलन सजिलो छ - जोजोसँग सकिँदैन, अप्ठ्यारो-असहज भन्ने जवाफ छ, उनीहरूले 'पशुपतिप्रसाद' चलचित्रमा 'मितबा' पात्रको अभिनय गर्ने प्रकाश घिमिरेलाई भेट्दा हुन्छ । उनको घर पुगे हुन्छ ।
त्यसो त उनको परिचय 'मित बा' पात्रले मात्रै पुरा हुँदैन । टेलिश्रृंखला 'दलन' मा धम्मरे परियार नामका पात्र भएर 'क्यामेरा फेस' सुरू गरेका उनले नेपाली भाषाका हालसम्म २२ वटा चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन् । रंगमञ्चबाट क्यामेराका अघि आएका ५५ वर्षीय घिमिरे कुनै चलचित्रमा पनि नायक/सहनायक भएर पर्दामा आएका भने छैनन् । उनको 'रोल' चरित्र अभिनेताको छ । यही भूमिकामा पनि उनी खेलेका चलचित्रका प्रभावशाली पात्र छन् ।
पोखराको नदिपुर बस्छन् । घरनजिकैको कन्या माविमा निमावि तहका बिद्यार्थीलाई गणित विषय पढाउँछन् । साँझ-विहान श्रीमती, तीन छोराछोरीका साथ घर र दुइवटा माउ गाइ भएको गोठमा भेटिन्छन् । साँझ-विहान गाईलाई घाँस-पराल हाल्छन्, दुहुन्छन् । भकारो सोर्छन् । विहान गोठबाट निस्केर घर पुग्नुअघि चर्न जान दिन गाई फुकाउँछन् ।
ठूलीछोरी चितवनमा 'बीडीएस' र सानी सँगै रहेर पोखराको जनप्रिय कलेजमा बीबीए पढ्दैछन् । 'डिप्रेसन' की विरामी श्रीमती र 'डाउन सिन्ड्रोम' भएका १९ वर्षका छोरा प्रतीकलाई उनले समय दिएका छन् । 'छोरीहरू भरपर्दा छन्,' उनी भन्छन्, 'इन्टरनेट टेक्नोलोजीका धेरै कुरा मलाई छोरीहरूले बुझाउँछन् ।' छोरो जन्मिएको धेरैबेरसम्म रोएन । चिनजानका चिकित्सकले पटक-पटक हेरे । उभिन-बोल्न नसक्ने हुने बताएको त्यो सन्तानलाई उनले सकेजति सीप लगाए । उपचार चलाए । 'अहिले नर्मल केटाकेटी जस्तो त छैन तर, हिड्न-बोल्न सक्छ,' उनले भने, 'बिस्तारै भर पर्न सकिने भएको छ । उसका रुचि र रहर अलि फरक छन् ।' कन्या मावि संस्थापकमध्येका एक तथा पूर्वप्रधानाध्यापक तेजनाथ घिमिरे साहित्यकर्मी पनि हुन् । यिनै तेजनाथका तीन छोरामध्ये प्रकाश जेठा हुन् । पिता-पुत्रको बसाइँ छुट्टाछुट्टै भएपनि नजिकै छ ।
पारिवारिक अवस्था र शिक्षण पेशाको निरन्तरताका हिसाबले घिमिरेसँग 'अभिनय' जस्तो शोखको अतिरिक्त क्रियाकलापमा खर्च गर्न फुर्सदिलो समय देखिँदैन । अभिनयका लागि समय कसरी निस्कन्छ ? 'शुक्रवारको स्कुल हाफ छुट्टीपछि शनिवार दिनभर मेला लागि समय छ,' उनी भन्छन्, 'अनि स्कुल विदा परेका बेला मेरो समय सुटिङका लागि हो ।' आफ्नो पिरीयड नपरेका बेला स्क्रीप्ट पढ्न घोरिने गरेका उनको काम गराइ देख्ता सँगैका शिक्षक सहकर्मी पनि छक्क पर्छन् ।
'प्रकाश सरले कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्ने अचम्म लाग्छ, हाम्रा सहकर्मी यस्ता भनेर गर्व पनि लाग्छ,' कन्या माविका प्रअ प्रेम बुढाथोकी भन्छन्, 'छुट्टी निकै कममात्र लिनुहुन्छ । त्यसैपनि स्कुलमा र्सार्वजनिक विदाका दिन धेरै आइपर्छन् । उहाँले त्यो समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्नुभएको छ ।' साढे तीन दसकदेखि शिक्षण पेशा गरिरहेका उनको जागिरमा स्थायी भएकै अवधि २९ वर्ष पुगिसकेको छ । 'मलाइ जहिले पनि लाग्यो, म नभए घर, बुवाआमा, परिवारको विचल्ली हुन्छ । कसले भेरो ठाउँमा भरको काम गर्छ,' घिमिरेले भने, 'त्यसैले मैले घर छाड्न नसकेको हो । हुन त म गलत पनि हुन सक्छु । तर, मेरो भागको दायित्व जेजे छन् त्यो मैले नै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । गर्दैआएकै छु ।' शुक्रवार आधा दिनको अध्यापन समय, शनिवारको विदा, अनि र्सार्वजनिक विदाका दिनहरू फारो गरिगरि अभिनय कर्मका लागि खर्च गर्ने उनले बताए । 'टाढा गएर धेरै दिनसम्म सुटिङ चल्ने सिनेमा मेरा लागि समस्या हो तर, साथीभाइले मलाइ सजिलो हुनेगरि समय मिलाइदिएका छन्,' उनले भने, 'कतिपटक अवस्थाअनुसार मैले पनि एडजस्ट गरेको छु ।'
नेपाली सिनेकर्मको अभिनय क्षेत्रमा फरक प्रकारको काम गराइका लागि चिनिएका नवीन सुब्बा र अनुप बराल घिमिरेको कला क्षेत्रको 'करिअर' सँग जोडिएर आउने नाम हुन् । रंगमञ्चमा अभिनय गर्दै आएका उनलाई क्यामेरा अघि 'दलन' निर्देशक सुब्बाले धम्मरे परियार बनाएर उभ्याए । दलनको कथालाई क्यामेरामा उतार्नुअघि 'कास्टिङ डाइरेक्टर' को जिम्मेवारी बरालले सम्हालेका थिए । उक्त पात्रमा घिमिरे ठीक हुने निर्णय उनैले गरेका हुन् ।
सञ्चारमाध्यममा प्रभावशाली व्यंग्यचेतका कार्टुन बनाइरहने कलाकार दुर्गा बराल 'वात्स्यायन' घिमिरेका छिमेकी हुन् । चार/पाँच वर्षे उमेरमा कान्छा भएपनि वात्स्यायनका जेठा छोरा अनुप बाल्यकालदेखि नै घिमिरेको संगतमा छन् । २०७० पछि बराल अधिकांश समय राजधानी केन्द्रित भएर 'एक्टर्स स्टुडियो' सञ्चालन गर्दै नवोदित तन्नेरीहरूलाई अभिनयकर्म सिकाइरहेका छन् ।
'उमेरका हिसाबले मैले प्रकाशजीलाई दाइ भन्नुपर्छ तर, हामीबीच साथीको नाता छ,' उनले भने, 'मेरो उमेरका केटाहरूभन्दा अलि बढि बुझेका, अगुवा र आड-भरोस भएका हुन् प्रकाशजी ।' बाल्यकालमा घरमा हुने अंग्रेजी किताव र कमिक्स बोकेर घिमिरेको गाइभैसी पालेको ग्रामीण बसाइँको झल्को दिने घरमा पुग्ने, त्यहाँ उनले ती किताब पढेर अर्थ्याइदिने गरेको स्मरण गरे । 'हामी टोलका केटाहरू केही सामाजिक कामका लागि जुटौं, केही गरौं भन्दा अगुवाइ प्रकाशजीले लिने हो,' उनले भने, '२९ सालतिर सूर्योदय युवा क्लव गठन गरियो, साहित्यिक कार्यक्रम र नाटक/प्रहसनको क्रम त्यहीँबाट सुरू भयो ।'
बरालको बुझाइमा घिमिरे जहिल्यै जीवन-जगतलाई बुझेका, नहतारिने, विचारेर मात्रै निर्णय दिने अगुवाका रूपमा रहिआएका हुन् । 'पहिलो नाटक गर्दा मैले प्रकाशजीको निर्देशनमा अभिनय गरेँ, दोस्रो नाटकका बेला निर्देशनको जिम्मेवारी मलाइ आयो, प्रकाशजीले अभिनय गरे,' उनले भने, 'अभिनय हाम्रो पूर्णकालीन पेशा थिएन, रहर थियो । मैले यही क्षेत्र रोज्न दिल्ली पढ्न गएँ, प्रकाशजीले घरपरिवार, पढाउने काम गरेरै पनि अभिनयलाई समय दिँदै आउनुभयो ।' थोरै काम गरेर धेरै प्रशंसा चाहने अभिनयकर्मीको भीडमा प्रकाशको बानी फरक रहेको उनको अनुभव छ । 'म फर्केर आएपछि लामो समय पोखरा बाहिर छु, हामीले अहिलेसम्म एउटै फिल्ममा सँगै काम गरेका छैनौं तर, एकअर्कालाई बुझ्छौं,' उनले भने, 'अवसर खोजीरहने, अवसरका लागि साथीभाइलाई आग्रह गरिहने बानी प्रकाशको छैन । अनौठो पनि लाग्छ ।'
'दलन' र 'नुमाफुङ' चलचित्रका निर्देशक नवीन सुब्बाको अनुभवमा घिमिरे कलाकर्मीमात्रै होइनन् । 'आहुतीजीले लेखेको कथाले दलनमा पर्वतको दक्षिण भेग स्याङ्जा जोडिने गाउँको परिवेश कुरा बोल्थ्यो, सुटिङ गर्नेबेला हामीले खौलालाँकुरी छान्यौं, जहाँको संस्कृति थोरै फरक थियो ।' यही फरकमा स्थानीय लवज र संस्कृतिमा पात्रका दैनिकीबारे घिमिरेले आफूलाई प्रष्ट्याएको उनले बताए । 'काम गराइको अनुभवअनुसार मैले प्रकाशजीमा एउटा कलाकारमात्रै होइन गण्डकी क्षेत्रको संस्कृति बुझेको स्रोतव्यक्ति पाएँ,' उनले भने, 'क्यामेराले खिच्ने कुरा कथाअनुसार कलाकारको अभिनयमात्रै होइन, नबोली, वर्णन नगरी पनि दर्शकलाई बुझाउने भाव खिचिन्छ, यसमा मैले प्रकाशको ठूलो सहयोग पाएको हो ।' घरको काम भ्याएर खौलालाँकुरी पुगी सुटिङमा पात्रको चरित्र प्रष्ट उतार्ने क्षमताले आफूलाई प्रभावित पारेको उनले बताए ।
पछिल्लो पुस्ताका सिनेकर्मी खगेन्द्र लामिछानेको 'धनपति' हालै प्रदर्शनमा आयो । यसअघि उनले आफैं शीर्ष भुमिकाको 'टलकजंग भर्सेज टुल्के' र 'पशुपतिप्रसाद' बनाइसकेका छन् । 'धनपति मेरो तेस्रो प्रोजेक्ट हो । प्रकाश दाइको रोल छोटो छ तर, यसमा पनि मैले दाइलाई छाडेको छैन,' उनले भने, 'उहाँको खुबी भनेको तपाइ यस्तो पात्र हो, सिन यस्तो छ भनेपछि सम्झाइरहनु पर्दैन । उहाँ सोझै त्यो चरित्रमा पस्न सक्नुहुन्छ ।' निकै कम कलाकारमा देखिने असाधारण खुबी उनका भएको लामिछानेको बुझाइ छ । 'म पोखरा नै बसेर पढेको हो, प्रकाश दाइ र अनुप दाइले नै मलाई अभिनयको क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्नुभएको हो,' उनले भने, 'घरपरिवार सुखदुःखका अवस्था थाहा छन् । तर, क्यामेरा अगाडि जुन पात्र भएर उभिँदा पनि प्रकाश दाइको अनुहारमा घरेलु तनाव र निराशाका भाव मैले देखेको छैन ।' स्क्रीप्ट तयार पार्दै गर्दा नै 'यो पात्रको अभिनयमा प्रकाश घिमिरे ठीक' भन्ने हुने गरेको उनले बताए । 'अरुको जस्तो बानी नभएकाले पनि उहाँसँग जसले काम गर्छ, उसले फेरि फेरि पनि काम गर्न चाहन्छ,' उनले भने, 'यो क्यारेक्टर म गर्दिन, यो गर्छु यो मबाट हुँदैन भन्ने जवाफ कहिल्यै सुन्न पाइएको छैन ।'
यतिबेला घिमिरे घनश्याम लामिछानेको 'पञ्चेबाजा' को स्क्रीप्ट पढ्दैछन् । छायांकन सुरू भएपछि युवा निर्देशक घनश्यामस“ग घिमिरेको यो तेस्रो चलचित्र हुनेछ । उनीहरूले यसअघि 'धौली' र 'अग्निदहन'(प्रदर्शन हुने तयारीको) मा काम गरेका हुन् । 'उहाँको टाइम टाइट हुन्छ, हामीले उहाँबाट काम लिन उहाँकै समयअनुसार चल्नुपर्छ,' लामिछानेले भने, 'तर, यति भइकन उहाँलाई जुन क्यारेक्टर दियो भनेपनि अभिनय जिवन्त हुन्छ । नाटकीय भाव पटक्क पनि छैन । कामप्रतिको डेडिकेसन लोभलाग्दो छ ।' नयाँ पुस्ताका कलाकर्मीले घिमिरेबाट सिक्न सकिने कुरा धेरै रहेको उनको बुझाइ छ । 'मान्छेपिच्छे समस्या कसका हुँदैनन् तर, अभिनय गर्छु भनेर आएपछि कुनै पनि बहानाबाजी नगरी खुरुखुरु काम गर्ने र यतिबेलासम्मका सक्नुपर्छ भनेर समयको महत्व सिकाउने मान्छे कमै छन्,' उनले भने, 'उहाँको त्यो सादा र संतुलित बानीव्यवहार प्रेरक लाग्छ ।'
तेजनाथ भूमिप्रशासन कार्यालयका नायवसुब्बा थिए । जागिरमा जिल्ला जिल्ला सरुवा भइरहन्थ्यो । जेठा छोरा प्रकाशले पितासँगै पोखरा बाहिर लमजुङ, धनगढी, परासी, जलेश्वर र जनकपुरमा पनि बाल्कयाकालका वर्षहरू बिताएका हुन् । २०३९ सालतिर पोखराको नदिपुरका युवाहरूले सूर्योदय युवा क्लव गठन गरेर साप्ताहिक भेटघाटको जमर्को कविगोष्ठीजस्ता साहित्यिक कार्यक्रमबाट थाले । यसको अगुवाइ उनैले गरेका थिए ।
आफ्ना उमेरका भन्दा पाका र कम उमेरका साथी बनाउन रुचाउने उनले साथीहरूसँग मिलेर सडकमा ढुंगा छाप्ने, चौतारो बनाउने र साहित्यिक कार्यक्रम आयोजनाको काममा सक्रिय हुँदै गए । साहित्यिक कार्यक्रमबाट युवा जमातलाई नाटक देखाउने रहर लाग्यो । दीपक पराजुलीले नाटक लेखे - जब इज्जत सल्कन्छ । 'त्यो नाटक हामीले तीन वर्ष त रिहर्सलमात्रै गर्‍यौं,' घिमिरेले सुनाए, 'त्यसपछि डाँफे कला मन्दिरमा सात दिनसम्म मञ्चन भयो । यही हाम्रो सुरुवात थियो ।' नाटक हेरेका सरुभक्तले ती तन्नेरीको जमातलाई 'ताण्डव नृत्य र अजम्मरी भ्वाइलिन' नामको आफ्नो नाटकमा अभिनय गराए । सरुभक्तले आफ्ना नाटकमा लिन थालेपछि घिमिरे रंगमञ्चमा बराबर प्रभावशाली पात्रको भुमिकामा देखा पर्न थाले । पोखरेली कलाकर्मीले 'प्रतिविम्व नाट्य समुह' का नामबाट नाटक लिएर राजधानी आउजाउको क्रम बाक्लियो । उनले दन्त्यकथा जस्तो, न्यायप्रेमी, सिरुमा रानी आदि नाटकमा अभिनय गरे । दिल्लीको नेशनल स्कुल अफ ड्रामामा पढेर फर्किएका अनुप बरालले उनलाई सरुभक्तद्वारा लिखित 'थाङ्ला' नाटकमा अभिनय गराए । 'दलन' ले उनलाई पहिलोपटक रंगमञ्चको संसारबाट क्यामेराअघि लगेको थियो । त्यसपछि सुवर्ण थापाको सर्ट मुभी 'मलामी' मा काम गरे ।
यतिबेला उनको पनि अभिनय देख्न पाइने सूचिमा 'करोडपति,' 'छक्कापञ्जा-२' र 'अग्निदहन' चलचित्र प्रदर्शनको मिति पर्खाइमा छन् । याम थापाको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको 'हुर्रे' को छायांकन सुरू हुन लागेको छ ।
सांस्कृतिक र सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएकाहरूको पुरानो संस्था पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारको सचिवदेखि अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका घिमिरे यतिबेला पहिले जसरी कविता लेख्ने, गीत गाउने भने गर्दैनन् । 'त्यो एउटा बेला थियो, यतिबेला थोरै पनि फुर्सद निस्क्यो भने किताब पढ्छु, सिनेमा हेर्छु उनले भने, 'अबका नेपाली सिनेमा मौलिक प्रकारका बन्दैछन् । आफूले पाएको भुमिका कसरी गहकिलो हुन्छ भन्ने सोच्छु ।'
रंगमञ्चबाट सिनेमामा पुगेका कलाकारलाई अभिनयका दृष्टिले कुन राम्रो भनेर सोधियो भने 'रंगमञ्च' भन्ने धेरै हुन्छन् । 'दुवैका खुबी आआफ्नै पाराका छन्, सिनेमामा टेक खाएजस्तो नाटकको रिहर्सलमा तयारी राम्रो चाहिन्छ,' उनले भने, 'सिनेमामा अगाडि अर्को पात्र भएन भनेपनि क्यामेराले कताबाट खिच्छ भन्ने हेक्का राखेर एक्लै पनि डाइलग बोल्नुपर्छ, एउटै सिनलाई भिन्न भिन्न कोणबाट पटकपटक सुट गर्दा कलाकारले संतुलित भइरहनु सजिलो कहाँ हुन्छ ।'
(कान्तिपुर कोसेलीमा १० भदौ २०७४ मा प्रकाशित यो लेखोट सामान्य सम्पादनपछि ब्लगमा संग्रहीत)
पोखराको बसाइँमा धेरै भेट हुने मान्छे कला र साहित्यमा लागेकाहरू नै छन् । प्रकाश दाइका अभिनय चलचित्रमा हेर्दा र भेटघाटमा कुराकानी हुँदा यिनका बारेमा लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेकै हो । अझ जब यिनको घर पुगियो, घरमा नभेटेर गोठ पुगियो ।
गाइ दुहुँदै गरेका माडसाबसँगै उनले पढाउने स्कुल आइयो, दैनिकीमा समयको व्यवस्थापन रमाइलो लागेको हो । हामी एउटा क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को क्षेत्रमा समय व्यवस्थापन गर्न असजिलो मान्छौं तर, प्रकाश दाइको व्यवस्थापनको तरिका पढ्न-सुन्न उदाहरणीय लागेको हो । कोसेली संयोजक साथी पुरुषोतमजीलाई 'म प्रकाश घिमिरेका बारेमा लेख्छु' भन्दा उनी एकैवचनमा खुसी भए र, लेख्नैपर्ने भने । त्यसपछि लेख्ने जमर्को गरियो । लेख्तालेख्तै लामो भयो । त्यसैले माथि घिमिरेले चलचित्रमा अभिनय गरेवापत कति पारिश्रमिक पाउँछन्, त्यो पैसा के गर्छन्, सिनेमा पाउनको सजिलो अप्ठेरो, अनि उनका दुर्गुणका चर्चा लेखिएन । राम्रा नराम्रा बानी सबैका हुन्छन् । समाजलाई घातक लाग्ने बानी छैन, राम्रा बानीको बलले छवि उज्यालो छ भने सामान्य अप्ठ्यारा बानी उल्लेख्य पनि हुन्न । त्यसैले जेजे अँटाएनन्, ती नहुँदा पनि लेखोट अपुरो लाग्दैनन् भन्ने ठानियो ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:33 PM No comments:
आमाबुवाका कुरा कति मान्ने - तन, मन धन दिनुपर्ने कामका लागि अझ कसमै खुवाए सन्तानले गर्ने कि नगर्ने ? अरूका लागि दुविधाका विषय होलान् तर, पोखरा बृद्धाश्रमका अध्यक्ष ७८ वर्षीय वसन्तकेशव पराजुलीका लागि ढुंगामा लेखिएका अक्षर जतिकै छन् ।
उनको दिनरात ४८ बृद्धबृद्धा र कर्मचारीसहित ६० जना आश्रित आश्रमलाई सक्षम बनाउने कोशिशमै बितेका छन् । पोखराका शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापनाका लागि सक्रिय केही थोरै नाममध्ये छुटाउनै नमिल्ने नाम हो ऋषिकेशव पराजुलीको । कांग्रेसी राजनीतिकै खातिर उनले केही वर्ष निर्वासित जीवन पनि गुजारे । कांग्रेसको दिन फर्किएपछि भने उनले पार्टीबाट केही लाभ लिएनन् । कुनै सरकारी ओहदाको मोह राखेनन् ।
उनैका जेठा छोरा हुन् बसन्त । बाबुभन्दा राजनीतिक विचारमा फरक । उर्जाशील उमेर शिक्षण पेशामा गुजारेपछि अवकाशको जीवन बसन्तलाई आफ्नै सुरले जिउने ध्याउन्ती थियो । पञ्चायतकालमा अभिभावकको निर्वासित जीवनलाई उनले फरक पाठ सिकाएको थियो । 'मलाइ लाग्थ्यो, राजनीति मैले जाने बाटो होइन', उनले भने, 'त्यसैले मैले कहिल्यै राजनीति गरिँन । तर, त्यसको छर्कोबाट मुक्ति पनि मिलेन । कतै न कतै खरो भएर बोल्दा पनि फरक अर्थ निकाल्ने रहेछन् ।'
२९ वर्ष प्राध्यापन पेशामा उनले ६ ठाउँ पढाए । तीन ठाउँ प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा रहे । अवकाशपछि उनले २०५२ मा सेवानिवृत्त शिक्षकको संगठन बनाए । आफू अध्यक्ष भए । हकहितको कुरा गर्नु राजनीति नै भन्ने बुझियो । २०१४, २०३६ र २०३८ का विद्यार्थी र शिक्षक संघर्षका दौरान तीनपटक थुनामा पनि परे । पढाउने पेशाअघि उनले २०१२ देखि तीन वर्ष किराना पसल पनि गरि हेरे । २०१५ देखि नेपाल एयरलाइन्सको एउटा एउटा एजेन्सीमा भैरहवा र जनकपुर पुगी जागिरे भएर अढाइ वर्ष बिताए ।
'५२ सालमा बुवाले मेरो एउटा कुरा मान भनेर वाचा गराउनु भयो', उनले भने, 'त्यो वाचा यो पोखरा बृद्धाश्रम चलाउने भन्ने थियो ।' बृद्धबृद्धाले परिवारबाट परित्यक्त जीवन बिताउने क्रम सुरू हुनुलाई बुवाले दूरदृष्टिबाट देखेको उनले बताए । बाबुले दिएको २६ हजार ७ सय रूपैयाँबाट पोखरा-१७ सीतापाइलामा आश्रम सुरू गर्दा यसको दीर्घकालीन सञ्चालनको कुनै योजना थिएन । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका उनका पिताजी २०५३ मा ७९ वर्षमा उमेरमा दिवंगत भए । जिम्मेवारी पुरै काँधमा आयो । 'मैले सुरूमै भनेको थिएँ, आश्रम आफ्नो खुट्टामा उभिने भएपछि मैले स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ', उनले सुनाए, 'अहिलेको उपक्रम यही छ कहिले आश्रम सक्षम होला भन्ने ।'
आफूले धर्मकर्मको मार्गमा हिड्न स्वतन्त्र हुन पाउनुपर्छ । तीर्थाटनका लागि समय मिल्नुपर्छ । 'तर, म वचनले बाँधिएको छु', उनले भने, 'यो आश्रममा आश्रित बढेका छन् । भवन बनाउन थालियो । पुगनपुगकै चिन्तामा दिन जान्छ ।' बसन्तकेशव नेतृत्वको आश्रम पोखरेलीका लागि अहिले नौलो तीर्थ भएको छ । जन्म दिन, दिवंगतका पूण्यतिथिका दिन यहा“ आउने, भेला भएर आश्रतिलाई खाना खुवाउने, दान दिने चलन बसेको छ ।
आफ्नो घर, परिवारलाई समय नदिएर बसन्तले बृद्धाश्रममा बाबुलाई दिएको वचनको मान राखेका छन् । यहाँ सबै आश्रित उमेरका ६० वसन्त नाघेकाहरू छन् । आधा दर्जन असी नाघेकाहरू पनि छन् । खानपान, रोगव्याधि र उनीहरूको सजिलो बसाइँको व्यवस्थापन सजिलो छैन । 'मैले आफ्नो घरपरिवारलाई समय नदिएर आश्रमलाई दिएको छु', उनले भने, 'यो एउटा तपस्याकर्मभन्दा कम छैन । तपस्याकर्म कहिल्यै सजिलो हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ ।' सानो झुप्रो, पाँच बृद्धबृद्धाबाट थालेको आश्रम अहिले करीब डेढ करोडको भौतिक संरचना भएको बनेको छ । यद्यपि निर्माणका काम अझै जारी छन् । अब केही स्वास्थ्यकर्मीको ध्यान यहाँ पुगेकाले आश्रितको सञ्चो-बिसञ्चो १५/१५ दिनमा चेकजाँचको व्यवस्था मिलेको छ । दान दिन आउनेका मायाले मात्रै यहाँको दैनिकीलाई खर्च यथेष्ट छैन । उनले भने 'सुरूमा दुइ सहयोगीले भवन बनाउन सघाए, पछि गायक कर्ण दासले २ महिनाका लागि बुढाबुढीको खानेकुरामा सहयोग गरिदिएर सजिलो बाटो खुलेको थियो । अझै पनि जहाँ जहाँ सकिन्छ हात फैलाएर माग्दै यहाँ ल्याउँछु । सुनेर मन पग्लिएकाहरूले विदेश पुगेर पनि सम्झेका छन् ।'
बाबुको एउटा वचनको मानका खातिर आफ्नो जीवनको अवकाशको समय आफूजस्तै बृद्धबृद्धाका बीच बिताउनु अब भने बन्धन जस्तो नलाग्ने उनले सुनाए । 'यो आश्रम कुन दिन आफै दिनदिनैको खर्च धान्ने होला भन्नेमात्रै ध्याउन्ती छ', उनले भने, 'खासमा बृद्धबृद्धा आफ्नै परिवारका बीच आफूले आर्जेको घरमै बाँचेको राम्रो भन्ने लाग्छ । तर, जसका लागि त्यस्तो सम्भव भएन, उनीहरूलाई यो ठाउँ जहिल्यै आश्रय दिनसक्ने भइरहनु पर्छ ।'
(नेपाल म्यागजिनको 'जीवनका रंग 'स्तम्भमा ०७२ मा प्रकाशित लेखोट संग्रहका लागि ब्लगमा राखिएको)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:16 PM No comments:
विराटनगरबाट आफ्नै जिप लिएर मुक्तिनाथसम्मको यात्रामा निस्केका जयेश बोहोराले पोखरा आइपुगुञ्जेल पनि इन्टरनेटमा हिमालपारिको जिल्लाको सडकमार्गको अवस्था 'सर्च' गरिरहेका थिए । पोखरा बस्ने साथीभाइसँग पनि आफ्नै गाडी जान सजिलो-अप्ठ्यारो बारे जानकारी लिइरहे ।
बेनीबाट घाँसा, मार्फा, जोमसोम र त्यहाँबाट मुक्तिनाथ अनि छुक्साङ पुगेर आनन्दले दुर्इ रातको बसाइँपछि पोखरा फिरेका उनले भने 'अब मेरा साथीहरू धेरैजना यताको यात्रामा आउने छन् ।' यही यात्रामै रहेका विराटनगरका सुकुमार सेनले पनि कोलकातामा रहेका भाञ्जालाई मुस्ताङ आउजाउका फोटा 'ह्वाट्स एप' पठाए । 'मैले अब भाञ्जालाई घुमाउन नल्याइ नहुने भयो,' उनले भने, 'यति सजिलो यात्रा होला भन्ने सोचेकै थिइँन ।'
यतिबेला मुस्ताङ उक्लने सिजन होइन । तर, यात्रुको चाप भने घटेको छैन । यो जिल्ला प्रवेश गर्दाको पहिलो गन्तव्य घाँसामा प्रहरी चौकीले आउने सवारीको रेकर्ड राख्छ । चौकी इञ्चार्ज योगेन्द्र यादवका अनुसार सार्वजनिकभन्दा निजी सवारी आगमनको दर निकै उच्च छ । 'सिजनमा सरदर महिनाको बस, ट्रक, ट्याक्टर र साना गाडी १५ सय जति र मोटरसाइकल दुइ हजारवटा जति मुस्ताङ आउँछन्,' उनले भने, 'भिरालो बाटो भएपनि यहाँ दुर्घटना नहुनु चाहि अचम्म लाग्दो छ ।' उनका अनुसार गत असोज र कात्तिकमा घाँसा भएर मुस्ताङ पुगेका गाडीहरूमा बस ६३४, जिप-कार १७१३, ट्रक १७९ र ट्याक्टरको संख्या ९९ वटा रह्यो । यो अवधिमा पुगेका मोटरसाइकलको संख्या ६०३५ रहेको रेकर्ड छ । 'इन्ट्री गराएर मात्रै जाने भएकाले हामीले कुनै गाडी नफर्के वा केही सामान हराए खोजी गर्छौ,' उनले भने, 'मुस्ताङ घुम्न आउनेहरू नेपालको अरु ठाउँ यसरी भीड भएर जाँदैनन् होला ।' सडक सहज भएकै कारण हिमाल पारिको जिल्ला हेर्न रहर लाग्नेहरू आउने गरेको उनले बताए ।
कोवाङ-६ का अशोक गौचन गोठभरि खच्चड पाल्थे । यिनै खच्चडलाई पोखराबाट सामान बोकाएर जोमसोम ल्याउँथे । 'पोखरा ओहोरदोहोर गर्न महिना दिन बिताउनु पर्थ्यो,' ६० वर्षपार गरेका गौचन अतित सम्झँदै भन्छन्, 'यति छिटै जोमसोममा मोटर आउला भन्ने मैले सोचेकै थिइँन ।' २०४९ सालतिर बागलुङमा मोटर चल्यो । २०५२ देखि बेनीबाटै बस चल्न सुरु भयो । 'पछि महिनाभरिको पोखरा आउजाउ सात दिनमै भ्याउन थालियो,' उनले भने, 'हिंड्दा-हिड्दै हाम्रो जीवन बित्यो तर, अब सुविधा देख्न पाइयो ।' ०६३ सालपछि जोमसोमसम्म नै मोटर चल्न थालेपछि खच्चड पाल्न छाडिएको उनले सुनाए । 'अब त मुस्ताङीको लाइफस्टाइलमै ठूलो परिवर्तन आइसक्यो, पोखराबाट खच्चडमा सामान बोकाएर ल्याएको सम्झिँदा-सुनाउँदा एकादेशको कथा जस्तै लाग्छ,' उनले भने ।
सडकले नेपालीको पहुँच चीनको सिमाना कोरला नाकामा सोझै जोडिदिएको छ । नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि कोरलासम्म ४ सय ३५ किमी कालीगण्डकी कारिडोरको यो उत्तर-दक्षिण राजमार्गले जोमसोम बजार मुग्लिन जस्तै खाना खाने केन्द्र बन्न पुगेको छ । पोखराबाट बिहानै निस्केको मोटर बाटोमा अवरोध भएन भने दिउँसै जोमसोममा खाजा खान आइपुग्छ ।
यहाँको सडक निर्माणको इतिहासमा नेपाली सेनाको ठूलो भुमिका छ । कुनै समय बेनीदेखि जोमसोम सडक खन्न सरकार पनि तयार थिएन । यो खण्डमा ठूला पहराले कामदारलाई निकै जोखिम थियो । तर, देशमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्कंदै गर्दाको समय सेनाले जोमसोम सडक खन्ने जिम्मा लियो । ५ वर्ष लगातार मिहिनेतले बेनीदेखि जोमसोम ट्रयाक खोल्न सफल भयो । २०६३ बैशाखमा गणतन्त्र घोषणा भयो, यही महिनादेखि जामसोममा सेनाले मोटर बाटो बनाएरै छाड्यो ।
'जोमसोम, लोमान्थाङ, कोरलामा मोटर चलेको देख्दा एउटा सपनाको क्षण जस्तै लाग्छ,' धौलागिरि बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल तथा पूर्व सांसद चन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, 'अब मुस्ताङ र पोखरामा कुनै भिन्नता रहेन । ६० सालसम्म यहाँको जनजीवन निकै फरक थियो, वर्ष लाग्दा पनि घर छोड्नुपर्ने, हिउँदमा पनि घर बस्न नसकिने । खच्चडलाई भारी बोकाएर परिवारसहित खुला चौरमा बसिन्थ्यो ।' हिउँदको चिसो र वर्षाको पानी छल्ने मेसोमा आम्दानी पनि गर्न खच्चडलाई सामान बोकाएर सपरिवार हिंडेर बेंसी झर्नुपर्ने बाध्यता अब हटेको उनले बताए । ४० साल अघिको त्यस्तो थियो । पछि यहाँको जनजीवनमा केही परिवर्तन आयो । वर्षायाममा घरमै बस्ने, हिउँद लागेपछि पोखरातिर झर्ने । तर, अहिले यो पनि बदलिएर यहाँका स्थानीय वर्षभरि नै घरमा बस्ने क्रम बढेको उनले सुनाए ।
अहिले म्याग्दीको गलेश्वरदेखि कोरलासम्म कच्ची सडक छ । अबको ५ वर्ष भित्र जोमसोमसम्म कालोपत्रे सडक बन्ने निश्चित भएको छ । बागलुङ मालढुंगा-गैंडाकोट र बेनी-कोरला दुइ भागमा बिभाजन गरेर निर्माण सुरु गरिएको सडक बिभागले जनाएको छ । कच्ची सडकमै भएपनि जोमसोमदेखि काठमाडौंसम्म रात्री बस संचालन भइसकेको छ ।
सडकलाई स्तरोन्नति गर्न गैंडाकोटदेखि कोरलासम्म ४ सय ३५ किमी सडक निर्माणमा पछिल्ला सरकारले निकै प्राथमिकता दिएका छन् । सडक विभागले जोमसोम-कोरला सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यो सडकको निर्माण दुइ बर्ष भित्रै सकिने विभागले जनाएको छ । यसका लागि विभागले मंसिरदेखि जोमसोम बजारमा कालीगण्डकी करिडोर कार्यालय संचालनसँगै बेनी-जोमसोम र तेस्रो चरणमा मालढुंगा-गैंडाकोट सडकको निर्माण पुरा गर्न सरकारले योजना ल्याएको छ ।
उत्तर-दक्षिण राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देल भन्छन्, यो उच्च प्राथमिकतामा परेको उत्तर-दक्षिण मार्ग हो ।' जोमसोमदेखि कोरलासम्मको १ सय १० किमी सडक खन्न २ अर्ब ५० करोड विनियोजन भइसकेको छ । विनियोजित बजेटअन्तर्गत यो वर्ष ३९ करोड निकासा भइसकेको छ । बेनी-जोमसोम ७६ किमी सडक पुरै कालोपत्रे गर्न अब काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ । कालीगण्डकी करिडोर सडकमा कोरलादेखि गैंडाकोटसम्मका मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा र नवलपरासी जिल्ला पर्छन् । यो सडकले नवलपरासीको तर्राई क्षेत्रबाट सोझै चीनको कोरला सिमानासम्म जोड्ने छ । उत्तर-दक्षिणको यो सडक गैंडाकोट-मालढुंगा २ सय ३५, मालढुंगा-वेनी १४, वेनी-जोमसोम ७६ र जोमसोम-कोरला १ सय १० किमी छ । ४ सय ३५ किमी लामो यो सडक मुलुकको उत्तर-दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो राजमार्ग हो ।
कुनै समय थियो, राजधानीबाट मुस्ताङ आउँदा कम्तीमा सातादिनको भ्रमण तालिका चाहिन्थ्यो । पोखरासम्म आउन सुविधा थियो तर, मुस्ताङ पुग्न ठूलो सकस । गत माघदेखि जोमसोम-काठमाडौं रात्रीबस संचालनले मुस्ताङको यात्रा सहज बनाइदिएको छ । पोखराबाट जोमसोम पुग्न बसमा एक हजार भाडा तिरे विहान चढेर साँझ उत्रन सकिने भएको छ । बस संचालनले काठमाडौंबाट एकै रातमा जोमसोम आउन पाइन्छ । पोखरा र बेनीबाट मिनीबस तथा जीप परिवर्तन गर्नुपर्ने झन्झट रात्री बस संचालनले अन्त्य गरिदिएको छ ।
गत वर्षसम्म 'सिण्डकेट'ले बदनाम बेनी-जोमसोम सडकमा अहिले कुनै पनि सवारीसाधनलाई रोकछेक छैन । यात्रुहरू आफ्नो सुविधाअनुसारको सवारीसाधन लिएर आउजाउ गर्न सक्छन् । सिण्डिकेट पूर्णरुपमा हटेपछि यो रुटमा सवारी संञ्चालन खुला प्रतिष्पर्धामा भइरहेको छ । यहाँ मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पोखरा र काठमाडौंका समेत सातवटा ब्यवसायी समितिहरूले सार्वजनिक यातायातको सेवा दिइरहेका छन् ।
'सिण्डिकेट छैन । सबैका गाडी कम्पिटिसनमा चलेका छन्,' म्याग्दी बस तथा जीप ब्यवसायी समिति कोषाध्यक्ष मोहन केसीले भने, 'मौसमी ब्यवसाय भएकोले सजिलो-अप्ठ्यारोमा जनतालाई बोक्ने हामी मात्र हौं ।' मापदण्ड पुरा नभएकोले सडक विभागले हिउँदे अस्थायी 'रुट' कायम भएको छ । रुट कायम भएपछि बेनी-जोमसोम सडकमा पोखराको पृथ्वीराजमार्ग, मुस्ताङका दुइ समिति, म्याग्दीका तीन र बागलुङका एक बस ब्यवसायी समितिका सवारीसाधनले यात्रु बोक्ने गरेका छन । बेनीबाहेक बागलुङ, पोखरा र काठमाडांैबाट जोमसोमका लागि सोझै गाडी पाइन्छ । आन्तरिक यात्रु बोक्न छुट्टै स्थानीय सवारीसाधन पनि चल्ने गरेका छन् ।
'बेनी-जोमसोम सडकमा हल्ला जस्तो अवरोध छैन । सडक पहिलेभन्दा धेरै सुध्रिएको रहेछ,' काठमाडौंको कोटेश्वरका तीर्थयात्रु बोकेर आएको बा३ख ४८३४ नम्बर बसका चालक नारायण कार्कीले भने, 'आफ्नो गाडी कन्डिसनमा छ भने मुस्ताङ आउन सजिलै लाग्यो ।' मुस्ताङमा मंसिर, पुस, माघमा हिउँ पर्ने र असार, साउन, भदौ र असोज वर्षाले सडक अवरुद्ध पार्ने भएकाले फागुनदेखि जेठका चार र कात्तिकको महिना बेनी-जोमसोम सडकमा सवारी चाप रहन्छ ।
देशभरबाट बौद्ध तथा हिन्दुको साझा तीर्थस्थल मुक्तिनाथ दर्शन गर्न आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम गत वर्षाबाट निकै बढेको छ । सडकको अवस्था स्तरोन्नति भएकाले छोटो समय र न्युन खर्चमा हिमालपारीको जिल्ला सहजै पुग्न सकिने भएपछि आन्तरीक पर्यटकको ओइरो लाग्ने गरेको हो ।
(भीम घिमिरे, विनोद त्रिपाठी र घनश्याम खड्काको ७ फागुन २०७३ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रिपोर्ट)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 5:35 PM No comments:
माघको दोस्रो साता पोखरेली खेलप्रेमीका लागि वर्षेनी चल्ने पर्व जस्तै हुन्छ आहा-रारा गोल्डकप फुटबल । दिउँसो २ बजे मैदान धुइरिने, आ-आफूले पक्ष लिएका टिमका लागि हौसला बढाउने र खेलको मजा लिने क्रम चल्छ ।
मुलुकका अन्य शहरको दाँजोमा पोखरेलीलाई खेलकुदको पूर्वाधारमा सजिलो छ । यसको कारण एउटै ठूलो मैदान हो, जहाँ फुटबलका लागि मात्रै नभइ क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल, लन-टेनिस, आर्चरीका लागि छुट्टाछुट्टै ठाउँसँगै 'इनडोर' खेलहरूका लागि कभर्ड हल पनि छ । १४ करोड ३२ लाखको लागतमा 'इनडोर' खेलकै लागि अर्को ठूलो बहुदेश्यीय भवन निर्माणाधीन छ ।
सेती नदीको किनार रंगशालाका लागि २०३९ सालमा चार सय १७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । त्यसको अर्को वर्ष फुटबलका लागि मैदान तयार पारियो । प्यारापिट निर्माण भयो । २०५९ मा खेलप्रेमीकै सक्रियतामा मैदान तारबार गरिएको थियो ।
'फुटबलको जमाना फेरिएकै हो, पहिले एक्लाएक्लै रहरले खेलिने खेललाई सहाराले वर्षोनी प्रतियोगिता गर्न थालेपछि व्यविस्थत भएको हो,' पुराना फुटबल खेलाडी एवं सहारा क्लवका सल्लाहकार शम्भु कार्कीले भने, 'हामीले २४/२५ सालतिर खेल्दा न कोच हुन्थे, न राम्रो जर्सी न बुट ।' तीसको दसकसम्म पोखरामा फुटबल खेल्नेहरूले आफ्ना लागि चाहिने सामान र तालिमको व्यवस्था नै नभएको उनले बताए । 'पछि बिस्तारै टोल र क्लवहरूले फुटबल आयोजना गर्ने चलन बढ्यो,', उनले भने, 'सहारा क्लव गठन भएपछि मात्रै पोखरामा फुटबल खेलको आयोजना व्यवस्थित र गतिविधि नियमित भएको हो ।'
सहारा क्लवको आयोजनामा वर्षेनी हुने आहा-रारा गोल्डकप फुटबलको यसपटकको १५ औं संस्करण सुरू हुनु दुइ दिनअघिको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी सूर्ययबहादुर केसी अलि भावुक देखिएका थिए । पोखराका पूर्वमेयर तथा रारा र आहा चाउचाउको उत्पादक कम्पनी हिम श्री फुड्सका सञ्चालक केसी प्रतियोगिताको सुरुवातदेखिका मुख्य प्रायोजक हुन् । 'म मरेपनि मेरो परिवारले सकेसम्म यो प्रतियोगितालाई पछिसम्म प्रायोजक गरिरहने छ,' उनले भने, 'हामी सबै उद्यमीले खेलकुदलाई सघाएमात्रै समाजका लागि काम गरेको ठहर्छ ।'
सहारा क्लवको इतिहास खोतल्दा स्मारिकाहरूमा रमाइला प्रसंग छन् । २०५० अघिसम्म पोखरामा खेलकुदका आयोजनाहरू हुँदै आएपनि ती निरन्तर हुन गाह्रो परिरहेको थियो । फुटबल रुचाउने एउटा जमातलाई अग्रजहरूले हौस्याए । टिम बन्यो । फुटबल खेल्न र सामाजिक काममा अगुवाइ लिन अघि सरेको समुहले बसपार्कमा शौचालय बनाउन पहल गर्‍यो । सहारा क्लवका संस्थापक अध्यक्ष वसन्त थकाली भन्छन् 'हाम्रो टिम कोकाकोला कपको क्वाटर फाइनलमा पुगेको थियो । त्यही जोशलाई आफैं फुटबल टुनामेन्ट किन नगराउने भन्ने सल्लाह भयो ।' २०५७ मा जिल्लाका क्लवस्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गरेको क्लवले २०५८ मा क्याराभान गोल्डकपको आयोजना गर्‍यो । त्यसको अर्को वर्षदेखि नै आहा गोल्डकपका नामबाट वर्षोनी प्रतियोगिता आयोजनाको सिलसिला सुरू भयो । फुटबल आयोजना र प्रशिक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाएको सहारालाई स्थानीय र विदेशिएका पोखरेलीले सहयोग गर्ने क्रम सुरू भयो ।
'खासमा बलियो टिम बनाउनका लागि व्यवस्थित क्लव, नियमित अभ्यास र खटेर खेल्ने खेलाडी चाहिने महसुस भयो,' उनले भने, 'त्यसपछि आफ्नै टिमका लागि खेलाडी उत्पादन गर्न एउटा एकेडेमी चाहिन्छ भन्ने सल्लाह भयो ।' ०६१ देखि एकेडेमी सञ्चालन थालेको सहाराले पोखराको दोबिल्लामा २६ रोपनी जग्गा खरिद गर्‍यो । एकेडेमीको सुरुवाती चरणमा खेलाडी घरैबाट धाएर प्रशिक्षणका लागि जान्थे । 'एउटा अनुभव के भयो भने सम्पन्न घरका छोराहरू पढाइ बिग्रियो भनेर बहानाबाजी गरेर ट्रेनिङमा आउन छाड्ने, गरिब घरकाहरू बुट र प्याड आफैंले किन्न नसकेर बीचैमा छाड्ने,' पूर्वअध्यक्ष थकालीले भने, 'हामीले घरघर गएर कारण बुझेपछि अब गरिब घरका २० जना छोराहरू ल्याउने, उनीहरूलाई खानबस्न, पढ्न दिएर फुटबलको तालिम दिने, आठ/दसजना प्रोफेसनल खेलाडी टिममा लिने सल्लाह गर्‍यौं ।' यही सल्लाहपछि क्लवले एकेडेमीलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउन सकेको उनले बताए ।
हाल दोबिल्लास्थित सहारा एकेडेमीमा १६ जिल्लाका २८ बालकहरू छन् । उनीहरूलाई आवासीय सुविधासहित शिक्षा र फुटबलको दीक्षा दिइएको छ । क्लबमा सुरूदेखि नै सक्रिय फोटोपत्रकार सुदर्शन रञ्जित भन्छन् 'सहारा क्लब यसका पदाधिकारीको मात्रै होइन, पोखरेलीको सम्पती हो । सबैको माया र सहयोग पाएकाले नै यो टिकेको छ ।' एकेडेमी दिगो र दीर्घकालसम्म निर्वाध सञ्चालनका लागि सहाराले अक्षयकोष जुटाउने अभियान चलाएको छ । उक्त कोषमा बचतसँगै खेलप्रेमीले वर्षेनी आफूले सकेको रकम योगदान गरेका छन् ।
क्लवले वर्षेनी आयोजना गर्ने आहा-रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताबाट हुने आम्दानी एकेडेमीको खर्चका लागि मुख्य स्रोत रहिआएको छ । त्यसो त पोखराभित्र आयोजना गरिने फुटबलका प्रतियोगिताहरू दर्जन हाराहारी छन् । तर, सबै प्रतियोगितामध्ये भव्य र प्रतिष्ठित भने सहाराकै आयोजना मानिन्छ । पोखरा रंगशालामा र्सवाधिक दर्शक भित्र्याउने सहारा क्लव नै हो ।
पश्चिमाञ्चल खेलकूद विकास समिति अध्यक्ष खगराज पौडेलले भने, 'पोखरेलीको खेलप्रतिको लगावलाई सहाराले संगठित आकार दिएको छ ।' विदेशमा रहेका नेपाली र पोखरेलीको सहयोग हेर्दा देशका अरु शहरका क्लवले खेलका लागि यस्तो संगठित आकार बनाउन सकेको उदाहरण नपाइने उनले बताए ।
सहाराले क्याराभानको नामबाट पहिलो प्रतियोगिता गर्दा विजेताका लागि ५० हजार नगद पुरस्कार राखेको थियो । यतिबेला त्यो राशि ५ लाख पुर्‍याइएको छ । 'आयोजना सहाराले गरेको देखिएकोमात्रै हो, यो सबै पोखरेलीको आयोजना हो । हामी स्वयंसेवकमात्रै हौं,' क्लव अध्यक्ष वीरभद्र आचार्यले भने, 'फुटबल सबैको रोजाइको खेल हो । जसले जहाँ इमानदारीपूर्वक आयोजनाको प्रयास गर्छन् तिनलाई कसले नसघाउला जस्तो लाग्छ ।' सहारामा खेलप्रेमी र खेलका लागि चिन्ता गर्नेहरूको विचार मिलेको उनले बताए । 'हामीले संगठित हिसाबले आफ्ना प्रयास गरेका हौं, सरकारको मुखमात्रै ताकेर हामीले आफूले गर्नसक्ने कोशिश छाड्न भएन,' उनले भने, 'पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गर्दै १५ वर्ष बित्यो । अब त हाम्रो टुनामेन्ट गराउने सिस्टम पनि बस्यो । सबैको माया र सहयोगले यो सम्भव भएको हो ।'
आहा-रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताका फाइनलहरू
क्रस वर्ष टिम गोल
२०५९ पुलिस क्लव-फ्रेण्ड्स १-०
२०६० एमएमसी- पुलिस ३-१
२०६१ एमएमसी-पुलिस ३-२
२०६२ अफ्रीकन युनाइटेड-पुलिस २-०
२०६३ थ्रीस्टार-एमएमसी १-१ (४-३)
२०६४ पुलिस-एपीएफ २-०
२०६५ पुलिस-त्रिभुवन आर्मी ५-०
२०६६ पुलिस-आर्मी १-०
२०६७ थ्रीस्टार-एमएमसी १-०
२०६८ एमएमसी-जावलाखेल युथ २-०
२०६९ सहारा-थ्रीस्टार ०-१
२०७० एमएमसी-सहारा ०-१
२०७१ एमएमसी-थ्रीस्टार ०-१
२०७२ आर्मी- एमएमसी ०-१
२०७३ एमएमसी- सहारा १-०
तस्बिरमा पहिलो प्रतियोगिता (माथि) र सहारा आयोजनाको क्याराभान कपको एउटा खेल ।
(८ माघ २०७३ मा कान्तिपुरको खेलकुद पृष्ठमा प्रकाशित । सामान्य अप्डेटपछि ब्लगमा जतन गरिएको)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 10:58 AM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 10:26 AM No comments: